Taorian’ny nampidirana azy hopitaly noho ny faharovitan’ny fivaviany sy ny famoahany maloto aoriana mantsy dia tsy maintsy navoaka ny hopitaly ity zazavavy kely ity noho ny tsy fahampian’ny hoenti-manana. Tamin’ity herinandro ity izy no nivoaka ny hopitaly niaraka tamin’ireo ray aman-dreniny raha tokony hodidiana anio zoma 17 mey. Raha tsiahivina, norahonan’ilay anadahin-dreniny ho faty i Canizia raha vao milaza ny marina, taorian’ny nanimbany azy. Niharitra fanaintainana sy hifirify vokatr’izany ilay zaza nandritra ny herinandro izay vao fantatr’ireo ray aman-dreniny ny marina. Rehefa hitany ho hafahafa sy tsy salama mantsy ity zazavavy kely ity dia nanontaniana ka nilaza ny marina ihany. Manao antso avo amin’ireo malala-tanana sy tsara sitrapo ireo nahitany masoandro mba hifanohana amin’izy ireo na hiantso ny laharam-pinday 032 45 308 95. Tsy mbola nahazoana vaovao ny mahakasika ilay lehilahy nahavanon-doza. Efa malaza sy miely any an-toerana kosa ity zava-doza ity.